Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Imicimbi ye-FAA Isilumkiso esitsha se-Boeing 737 MAX
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelomoya ezichaphazelekayo kurhanelwa ukuba ziphumelele ukulawulwa kokuhamba kwe-elektroniki iipakethi zokungenisa umoya ezikhupha umoya kungena kwimithwalo evela kwezinye iindawo zendiza.
Isilumkiso sikhutshiwe malunga nomba wokucinezelwa komlilo kwi-Boeing 737 MAX.
Iijethi ze-Boeing 737 MAX kunye nezinye iimodeli ezingama-737 zichaphazeleka ngumyalelo wokhuseleko.
Umyalelo uchaphazela ezinye iiplanethi ezingama-2,204 kwihlabathi jikelele.
Iingxaki kubonakala ngathi azipheli kwiingxaki zeBoeing 737 MAX. Ngelixa i-US Ulawulo lwezoLawulo lwezoPhapho (i-FAA) irhoxise iodolo yayo yoqobo eyabeka yonke iBoeing Iinqwelomoya ezingama-737 MAX ngo-Novemba, ngaphezulu kwe-100 yeeplani ezazibonakala ngathi ziqalekisiwe zaphinde zangqinwa ngo-Epreli malunga nemicimbi nenkqubo yombane. Imodeli entsha kaBoeing, i-737 MAX 10, yemka okokuqala ngoJuni kwaye kulindeleke ukuba ingene kwinkonzo ngo-2023.
Kodwa kumyalelo omtsha, okhutshwe namhlanje, i-FAA ithintele amandla e-Boeing 737 Max & NG amandla okuhambisa izinto ezinokutsha, ephawula ukuba iinqwelomoya zinokuba nomcimbi nolawulo lokuhamba komoya kungena nokuphuma kwimpahla.
Iinqwelomoya zeBoeing 737 Max kunye nezinye iimodeli ezingama-737 zichaphazelekile ngumyalelo wokhuseleko, ofuna ukuba abaqhubi baqinisekise ukuba zonke izinto ezikumthwalo wempahla azinakutsha kwaye azinakutsha. Iinqwelomoya ezichaphazelekayo kurhaneleka ukuba "aziphumelelanga kulawulo lokuhamba kwe-elektroniki iipakethi zokungenisa umoya ezikhupha umoya kungena kwimithwalo evela kwezinye iindawo zenqwelomoya," ngokwe FAA.
Umyalelo uchaphazela ezinye iiplanethi ezingama-2,204 kwihlabathi liphela, ezingama-663 zazo zibhaliswe eMelika. Imodeli yeBoeing ye-737 Max ibisisiseko somhlaba ukusukela ngo-Matshi 2019 emva kwengozi ezibulalayo ezibulele bonke abantu abangama-346 ababekhwele ebhodini kutyhila ingxaki kwiinkqubo zekhompyuter. Uphando olwenziweyo luvele kuphela ngemicimbi yezokhuseleko, kwaye hayi kwimodeli engama-737 kuphela.
I-Boeing's i-777s kunye ne-787s ziye zajongwa ukuba zikhuselekile. Inkampani ngokwayo ikhuthaze abaphathi beenqwelomoya ukuba bamise inqwelomoya yeemodeli ezingama-777 ngoFebruwari emva kokuba iinjini ezininzi zaqhushumba phakathi, ngelixa kwakuloo nyanga, i-FAA yafuna ukuhlolwa kwe-222 Boeing 787s malunga neenkxalabo malunga neephaneli zokudodobala. Iinkxalabo zemveliso malunga "nobutyobo bezinto zangaphandle" ezishiye kwiiplanethi ezintsha ziyizisile i-mega-liner phantsi koqwalaselo oluthe kratya.